Manohitra ny fanonganam-panjakana sy ny fanjakan-dehilahy: Antsafa nifanaovana tamin’i Nandar, mpikatroka feminista ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Mampiroborobo ny zon'ny vehivavy ao Myanmar na dia any an-tsesitany aza
Voadika ny 15 Septambra 2021 4:18 GMT
Nandar nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana tany Myanmar. Loharano: Twitter
Nihetsika ireo olom-pirenena avy amin'ny lafivalon'i Myanmar mba hanangana ny fanoherana ny governemanta miaramila ao Myanmar, ao anatin'izany izay tsy mahagaga, ny mpanakanto sy ireo feminista. Iray amin'ireo mpanohitra ireo ny mpiaro ny zon'ny vehivavy malaza Nandar.
Nanangana ny Vondrona Feminista Volomparasy i Nandar, mpiara-mitantana ny famokarana ny The Vagina Monologues tany Myanmar, ary nandika ny bokin'i Chimamanda Ngozi Adichie amin'ny fiteny Birmana “Tokony ho feminista avokoa isika rehetra (We Should All Be Feminists).” Miresaka lohahevitra mikasika ny vehivavy ao Myanmar ireo rakipeony “Feminist Talks” sy ny “G-Taw Zagar Wyne”.
Ho fankasitrahana ny asany dia nampidirina tao amin'ny lisitry ny vehivavy BBC miisa 100 manome aingam-panahy indrindra sy mahataona indrindra eran'izao tontolo izao izy tamin'ny taona 2020. Voafidy ho an'ny fanondroana amin'ny Lokan'ny Fahalalahana Maneho Hevitra 2021 mikasika ny Sivana ihany koa izy.
Izy no lohalaharana tamin'ny fihetsiketsehana nandritra ny herinandro voalohan'ny fanonganam-panjakana mandra-pahatongan'ny famoretan'ny governemanta henjana nanery azy hiverina tany amin'ny tanànakeliny any avaratr'i Myanmar. Nandao ny firenena izy tamin'ny volana Martsa saingy nanohy nanohitra ny fanonganam-panjakana sady nampiroborobo ny fankaherezana ny vehivavy ihany koa.
Tamin'ny antsafa virtoaly nifanaovana tamin'ny Global Voices, nahatsiaro ny tetezamita sarotra natrehiny taorian'ny nandaozany an'i Myanmar i Nandar.
… Safidy sarotra tokoa ny fivoahana, ara-pientanam-po sy ara-batana. Tena dingana naharary niaraka tamin'ny fepetran'ny COVID-19 sy ny rehetra. Niasa mafy aho raha vao tafavoaka hany ka tsy niraharaha momba ny fahasalamako ara-tsaina sy ara-batana. Nahatsiaro marary mafy im-betsaka aho saingy nanohy niasa hatrany. Ny ankamaroan'ireo zava-nitranga ireo dia vokatry ny heloky ny sisa velona sy ny fizotran'ny alahelo nolalovako taorian'ny nandaozako ny firenena.
Ny rakipeon'i Nandar miresaka ny olan'ny vehivavy izay matetika no odian-tsy hita. Sary nahazoana alàlana.
Tsy nanakana ny Vondrona Feminista Volomparasy tsy hanohy ny asa fisoloam-bava ataon'izy ireo ny fanonganam-panjakana, ary na dia tsy afaka nanatontsoa ireo fikasana tahaka izany aza izy ireo teo aloha dia mbola mahita fomba hampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny fankaherezana ny vehivavy amin'ny alàlan'ny literatiora, rakipeo ary andiana atrikasa virtoaly ihany.
Mikasa ny hikarakara fifaninanana literatiora feminista izy ireo ary manao hetsika fanentanana mba hanairana ny saina momba ny fahasalamana ara-tsaina ao Myanmar. Namorona ny andiana atrikasa “manoratra mba ho sitrana” ihany koa izy ireo hampianarana ny olona ny fomba fampiasana ny fanoratana hiatrehana ny olana amin'ny fikorotanan-tsaina sy ny fahasalamana ara-tsaina.
Nasongadiny ny andraikitry ny vehivavy sy ny feminisma amin'ny fanoherana ny fanonganam-panjakana:
Amin'ny fanampian'ny fivoarana nomerika sy ny aterineto ary koa ny fandrosoana nataon'ny feminista tao Myanmar, dia nahatsapa tsikelikely ny vehivavy tao Myanmar fa tsy voatery hanampy ny fiarahamoniny na ny firenena ny fanafenana ny fahaizany manao zavatra. Noho izany, tonga ny fotoana hisehoan'izy ireo. Tamin'izay no niova ny lalao, hoy aho. Rehefa manapa-kevitra ny vehivavy sy ny tovovavy fa anisan'ity vondrom-piarahamonina izay norombahina sy anjakan'ny fitondrana jadona ity izy ireo. Noho izany, tsy maintsy manao zavatra momba izany ry zareo.
Tsaroako ny nanontaniako vehivavy kisendrasendra tany amin'ny fihetsiketsehana momba ny antony hieritreretan'izy ireo fa tokony ho eto amin'ny fihetsiketsehana miaraka amin'ireo lehilahy ireo izy ireo ary raha toa ka tena natao ho an'ny vehivavy tokoa ny politika noho ny fahalianana hanana fomba fijery momba ny hevitr'izy ireo, ary nilaza tamim-pahatsorana izy ireo izay heveriko fa afaka mamaly ny fanontanianareo ny fomba sy ny antony maha-zava-dehibe ny fanoheran'ny feminista sy ny vehivavy tsy ny rafitra jadona fotsiny ihany fa ny rafitry ny fanjakazakan-dehilahy ihany koa. Hoy izy ireo: “Raha mbola ny mpanao didy jadona no manohy mitondra ny firenena dia tsy ny lehilahy ihany no hijaly fa hijaly ihany koa isika. Izany no antony maha-zava-dehibe ho an'ny vehivavy ho anisan'ity revolisiona ity.”
Tao amin'ny webinar notontosain'ny Fikambanana ho an'ny Zon'ny Vehivavy amin'ny Fampandrosona dia niresaka momba ny fomba nanamelohan'ny feminista ny fomba fisainana tompomenakely ataon'ny mpanohitra ny fanonganam-panjakana sasany i Nandar:
Na samy eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana aza, araka ny nolazaiko teo, dia tsarain'ny lehilahy mpanao fihetsiketsehana amin'ny fomba fitafian'izy ireo mandritra ny fihetsiketsehana ny vehivavy. Ametrahana fanontaniana [izy ireo] momba ny fitafiany rehefa manao fihetsiketsehana. Heveriko fa fanontaniana tsy tokony apetraka izany rehefa mijoro ho an'ny demokrasia. Tsy tokony hanontany momba ny vatan'ny vehivavy ianareo, na inona na inona akanjo anaovany na koa ny fomba hanaovany fihetsiketsehana. Ny vatany fotsiny. Tokony hanana fahalalahana araka izay tiany sy amin'ny fanaovana fihetsiketsehana ny vehivavy. Ka heveriko fa zavatra tsy maintsy lalovan'ny vehivavy izany, indrindra amin'ny maha-vehivavy azy ireo. Tokony hasongadin'ny fampitam-baovao ihany koa ireo olana ireo.
Nizara ny fomba hanohanan'ny vondrona iraisam-pirenena an'i Myanmar sy ny hetsika manohana ny demokrasia i Nandar:
Ny firaisankina dia midika hoe mandefa hafatra amin'ny namanao na olona fantatrao ianao avy any amin'ny toerana misy ny krizy. Midika izany hoe mizara ny fahaizanao amin'olona mila izany ianao. Mety midika izany hoe mamihina olona ianao. Ny tena dikan'ny fototry ny firaisankina dia ny fiahianao ireo olona iharan'ny toe-javatra ao anaty krizy. Tiako ho fantatry ny olona fa tsy fihetsika lafo vidy ny fanehoana firaisankina. Azo atao amin'ny fomba maro izany raha tsy mametra ny tenanao ianao.
Manana hafatra ho an'ireo mpamatsy vola sy ireo sampan-draharaha iraisam-pirenena ihany koa izy izay manome fanampiana ireo vondrona sy olona tsirairay ao Myanmar:
Tsy maintsy mianatra mamolavola ny famatsiam-bolan'izy ireo amin'ny fahafahany milefitra ireo mpanome vola mba tsy handalovan'ireo feminista miasa ao anaty krizy dingana sarotra sy fandaniam-potoana rehefa mampiasa vola, mba hahafahan'izy ireo manao izay tokony hataony. Tokony handray andraikitra hanao tsara kokoa amin'ny famolavolana ny famatsiam-bola ireo mpanome vola.